देशभरका ३ लाख शिक्षकलाई खुसीको खवर ! मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो यस्तो निर्णय – List Khabar
Home / समाचार / देशभरका ३ लाख शिक्षकलाई खुसीको खवर ! मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो यस्तो निर्णय
देशभरका ३ लाख शिक्षकलाई खुसीको खवर ! मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो यस्तो निर्णय
admin November 9, 2021 समाचार Leaveacomment 147 Views
काठमाडौं । शिक्षकहरुका लागि शिक्षक अस्पताल बन्ने भएको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकले सोमबार शिक्षक अस्पतालका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
Previous जापानमा नयाँ प्रवेशको लागि आवेदन लिन शुरु
Next सानै उमेरमा विवाह गरेका मोदी किन लुकाउँछन् आफ्नी श्रीमती? सबैलाई चकि’त पार्ने यस्तो छ कारण !